Inombolo Yesibonelo ye-iPhone 12 Pro Max A2342, A2410, A2411, A2412 - Amagajethi
Inombolo Yesibonelo ye-iPhone 12 Pro Max A2342, A2410, A2411, A2412 Specs
I-Apple isanda kwethula uhlelo lwayo lwe-iPhone lwakamuva ngomcimbi wayo we-Hi-Speed. Umcimbi wango-Okthoba 13 usinikeze okungeziwe ochungechungeni. Kukhona ama-iPhones amane amasha atholakala emakethe. Ungathola izinhlobo ezahlukahlukene zefoni efanayo ezitholakala emakethe kulezi zinsuku. Kulo mhlahlandlela, sihlanganisa i-iPhone 12 Pro Max. Yifoni ehamba phambili ka-2020 enazo zonke izinsimbi namakhwela.
Amanani entengo asukela ku- $ 1099 kuya ku- $ 1399. Imodeli ye-Apple ehamba phambili inezinhlobonhlobo ezahlukahlukene emhlabeni jikelele. Kulo mhlahlandlela, sikhuluma ngezinhlobo ze-A2342, A2410, A2411, A2412.
Izici ze-iPhone 12 Pro Max:
I-iPhone Pro Max iza nezinto ezithile ezinhle. Kuletha ikhwalithi nokunemba ekusetshenzisweni kwe-smartphone yakho. Sincoma le divayisi kubo bonke abafundi bethu abanesabelomali. Ake sixoxe ngezinzuzo ezinhle kakhulu zokusebenzisa i-iPhone 12 Pro Max.
IPro Max iza nesikrini esingu-6.7 ”, esifanele abantu abafuna isikrini esikhudlwana. Inezikhala zesikrini eziningi ongazisebenzisa.
2. Ukusethwa kwekhamera kathathu
Amakhamera amathathu ngemuva enza kube ukuthenga okuhle. Amadivayisi we-Apple aziwa ngezinzwa zawo ezisezingeni eliphakeme. Ungachofoza izithombe ezimangalisayo ngale webhusayithi. Iphinde ilethe ukuzinza kwesithombe esibonakalayo. Ilensi yefoni ilungele ukusetshenziswa kwakho.
Ukwengezwa okuhle kuhlu lwe-iPhone ubuchwepheshe bayo beMagSafe. Kuyazuzisa ukushaja okulula. Ungabona imiphumela esheshayo ngale tech.
4. Ukuxhumeka kwe-5G
Ubuchwepheshe bamuva be-5G manje sebuzotholakala kahle. I-Apple isebenza ukufeza isipiliyoni se-SIM esisha.
I-Apple isazophinda futhi iqhubekele phambili ekubonisweni kwayo. Abasebenzisi bangathola ukufinyelela ku-Super Retina XDR Display. Ama-bezels mancane, futhi ungathola ukuboniswa okucacile kwe-crystal.
Kube nokuvuselelwa okuphelele ekwakhiweni kwedivayisi futhi. Ungabona ezinye izinzuzo ezisheshayo lapho uthuthuka kusuka ezizukulwaneni ezimbalwa ngaphambili. Lezi izengezo ezivamile kulo lonke uhlelo lwe-iPhone.
Amamodeli we-iPhone 12 Pro Max:
I-iPhone 12 Pro Max iza nezinombolo ezahlukahlukene ze-serial. Lokhu kukhona ukukusiza ngokuhlonza indawo. Ungathola uhlobo oluthile ngokuya ngendawo yakho emhlabeni jikelele. Lezi zinguqulo zifana kakhulu ngokubukeka. Kunezinguquko ezimbalwa kuphela kusakhiwo sangaphakathi samadivayisi. Nakhu ukuhlukaniswa ngokuhlakanipha kwesifunda kwala ma-iPhones.
1. I-iPhone 12 Pro Max A2342
Uhlobo lutholakala ngokuthengiswa kuphela emakethe yase-USA. Abasebenzisi bangakuthenga lokhu kunoma yisiphi isitolo esisemthethweni sama-apula noma kuwebhusayithi yabo eku-inthanethi. Yimodeli enhle kakhulu yabathandi bokuxhumana.
Abasebenzisi bathola ukufinyelela kunethiwekhi ye-5G esheshayo kule modeli. Uhlelo lwe-mmWave luncamela ukuxhumeka kwejubane eliphezulu.Abasebenzisi bangabona umehluko omncane ekubukekeni komzimba futhi. I-antenna yamanethiwekhi ibaluleke kakhulu kule divayisi.
2. I-iPhone 12 Pro Max A2410
Imodeli ye-A2410 iyatholakala kubasebenzisi abaneCanada neJapan kuphela. La mazwe womabili ahlukile ngokwamazinga okuphepha kwezakhamuzi zawo.
Ucingo luzophinda lusekele ama-sim amabili ngale modeli. Iza nensizakalo ye-e-SIM. Amandla we-5G nawo akhona, kepha ahlukile kwimodeli yase-USA.
3. I-iPhone 12 Pro Max A2411
Yinguqulo ethengiswa cishe nxazonke zomhlaba. Ingabizwa ngokuthi inguqulo yomhlaba jikelele yedivayisi ye-iPhone 12 Pro Max. Ngaphezulu kwamazwe ayi-100 + azothola ukufinyelela kule nguqulo yedivayisi ye-Apple. Ifana kakhulu nenguqulo ye-A2310.
Kubuye kube namandla we-sim amabili. Ungasebenzisa i-nano-sim ne-e-sim kudivayisi.
4. I-iPhone 12 Pro Max A2412
Abasebenzisi bangabona le nguqulo ithandwa e-Hong Kong, e-China nase-Macau. Izifunda ezisempumalanga ye-Asia zinemikhawulo ethile eyingqayizivele ebekiwe. I-Apple wuphawu lomhlaba wonke olufuna ukutholakala kalula yonke indawo.
Banikela ngedivayisi eyingqayizivele kulezi zifunda kuphela. Imikhawulo ye-inthanethi ezwenikazi laseChina yinto yangempela yansuku zonke. Iningi lezinhlelo zokusebenza ezisentshonalanga kumele zikhawulelwe. Ucingo lusekela namakhadi amabili we-nano sim.
Izinhlobo ezahlukahlukene ze-iPhone 12 Max Pro zilungele ukusetshenziswa kwakho okulula. Kubalulekile kubasebenzisi abafuna ukuthola idivayisi ye-Apple yakamuva. Sithemba ukuthi umhlahlandlela wethu ukwazile ukukunikeza imininingwane mayelana nezinguqulo ezahlukahlukene.
ukubukela ama-movie amasha ku-inthanethi mahhala ngaphandle kokubhalisa
isigqi samahhala sokwenza isoftware ye-mac
ingabe ikhona indlela yokuthola amakhadi wesipho samahhala we-amazon
I-xbox bukhoma amakhodi wamahhala wegolide
bukela ama-movie wamahhala ngaphandle kwe-akhawunti
ukukhansela kanjani okubhaliselwe kwe-crunchyroll